Ukuphupha ngemink Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Igama elithi "mink" lifutshane kwiintlobo ezimbini zamarhamncwa, oko kukuthi i-mink yaseYurophu kunye ne-American mink. Ngaphandle, i-mink ifana nesable, nosapho lwayo lwebhayoloji luxeliwe.
Nangona i-mink yaseYurophu isekhaya kwiindawo zethu, yenye yezona zilwanyana zisengozini kakhulu eYurophu namhlanje. Izizathu zoku, kwelinye icala, kukuzingela okugqithisileyo kwezi zilwanyana kwixa elidlulileyo kunye nokonakaliswa kwendawo yazo. Kwelinye icala, bagxothwa yi-mink yaseMelika, eyahlala eYurophu "njengembacu" okanye njengendoda ekhululekileyo kwiifama zoboya. Nangona kunjalo, ekutolikweni kwamaphupha, akukho mahluko wenziwe phakathi kwezi ntlobo zimbini ze-mink.
Nangona kunjalo, igama elithi mink linokuvela nakwezinye iimeko. Kungenxa yokuba eli ligama eliqhelekileyo lengubo ye-mink, eyenziwe ngoboya bezilwanyana. Kungenxa yoko le nto kuya kufuneka unike ingqalelo kwaye ucinge ngononophelo ukuba ubone isilwanyana okanye iimpahla ephupheni lakho.
1 Uphawu lwephupha «mink» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «mink» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «mink» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «mink» - ukutolikwa ngokubanzi
Isimboli yephupha "mink" inokubonisa, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ukuba lowo ukuyo el mundo yomlindo. abakhuphiswano abahle izakubetha. Kuya kufuneka ujongane nalo mdlali kwaye ngekhe ube nakho ukuwuphepha.
Nabani na obulala i-mink ngoboya bayo ephupheni angajonga phambili kumzuzu oyimpumelelo ebomini bakhe. Kule meko, eminye iminqweno ekudala ikho iya kuzaliseka.
Ukunxiba iimpahla ezenziwe ngemink kungakhokelela ephupheni mampunge kunye neminqweno yesini. Kule meko, ingubo ye-mink ifanekisela iminqweno okanye iinjongo ezibekwe phezulu kakhulu. Umphuphi kufuneka azame ukuthobeka ngakumbi ebomini bokuvuka. Ingubo ye-mink ngelixa ilele ihlala ibonisa ukuba umntu usebenzisa ubuqili ukuphumelela umdlali welinye iqela.
Ukubona umnqwazi owenziwe nge-mink ikakhulu kubeka ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha njengophawu lwe Amandla engqondo kunye namandla ophuphayo. Kuya kufuneka uyisebenzise le kwaye uyisebenzise ngenjongo. Ukuba une-mink muff ephupheni, unokufuna ukuzikhusela kwinto ethile okanye komnye umntu kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «mink» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwengqondo, zombini i-mink njengesilwanyana kunye nengubo ye-mink ingaba inzondelelo egqithisileyo bonisa kokubini emva kokuqwalaselwa kunye nezinto eziphathekayo. Umphuphi kufuneka alumkele olu hlobo lokuzibaxa kwaye azame ukubuyela esiqhelweni.
Ukuba umntu oleleyo unxiba uboya be-mink ephupheni lakhe, kwelinye icala, ngesicelo. khu seleko ngokunjalo nokhuseleko. Kwelinye icala, le meko yamaphupha inokufihla ukuziva ungonwabanga kwimeko ethile ebomini bokuvuka.
Ukusebenza simahla okanye imink yasendle inokuba ngumfanekiso ophuphayo Umnqweno wenkululeko ingcaciso yomphuphi. Lo mntu unokufuna ukuzikhulula kwimisebenzi yobomi bemihla ngemihla ebomini bokuvuka kwaye aphile ubuntu bakhe ngokukhululekileyo. Ukuba ubona i-minks zibanjiwe ngelixa ulele okanye i-minks ifakwa ekuthinjweni, ungaziva uxakekile okanye uxinezelekile. Kuya kufaneleka ukuba abo bachaphazelekayo bazinyange ngokwabo ngekhefu kunye nokuphumla.
Uphawu lwephupha «mink» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo lohlalutyo lwamaphupha, i-mink njengesilwanyana emaphupheni ihlala ibonisa oko I-Instinkthaft okanye ithuku lomntu olalayo. Oku kufuneka kulawulwe kwinqanaba elifanelekileyo ukuze ukuqhubela phambili ngokomoya kufezekiswe.